Madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo Wafdigiisa oo Goordhaw Gaaray Gaalkacyo Faahfaahin | Kalshaale
Madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo Wafdigiisa oo Goordhaw Gaaray Gaalkacyo Faahfaahin
Jan 13, 2018 - 4 Aragtiyood
Gaalkacyo (Kalshaale) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo oo maanta ka soo amba baxay Boosaaso ayaa goor dhow gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Farmaajo waa nin isagoo yar dowladii kacaanka kashaqa bilaabay waa nin og in dowladii kacaanku umada kkukala dirtay musuqmaasuq nin jcleysi iyo cadaalad daro waaya aragnimadaas isagoo kafaa iideysanaya ayuu iskudayaa inuu umada caadil unoqdo,waxaa hortaagan marka 3 caqabadood.1 Dowladaha shisheeye oo diidan in somaliya iskutaagto cagaheeda.2.Hawiye siyaasada usoogala kalacagee.3Majeerteen eey Majeerteenismku kala weynthy qatanimada.
Madxwaynu maaha nin Fula ah,walee waa Libaax meel taagan.
Puntland oo dhan ayuu sooo maray.Galmudug ayuu marayaa. Wax cabsi ah ka maan dareemin wajigiisa.
Hadii aan yara kaftamo
Waar Madaxwaynu markuu tagay degaanka Daarood,aftahn ayuu ahaa,qudbado wanaagsan ayuu jeedinayay.
Maxaa dhacay marka uu Xamar joogo?
Ma Wiilashii Indha Cacasaa ayaa meesha soo fadhiya,oo markaa ayuu isku dhexyaacaa?
Waar bal ninka ragaasi ka dheereeye marka uu ka qudbadaynao degaanka Hawiye.
Mise anaa qaldane wuu afbartay oo hadeedto Formaajo afmiinshaar ayu noqday?
Ta dambe Ayaan qaatay
Maxaweynaha isku kalsoonaan, geesinimo, iyo niyad wanaag Soomaalinimo intaba waa muujiyey.
Waxaad moodaa inay u bidhaamayso sharafta iyo midnimadii Soomaali lahaan jirtay. Isaga niyad wanaagiisa awgeed taasi waxaad moodaa inay sida xidig ilays badan ugu hillaacayso. Laakiin, waxaa iyana jirta in arrintaas suurtgalnimadeeda ay dad badan oo Soomaaliyeed mugdi ka galay, suurtgalnimadeedana ay u arkaan, inay ka horrayso dadaal iyo shaqo badan. Alla if kaas iyo sharaftaas qalbigeena ha ku dheeho. Dadaalaa wuu gaaraa, wixii aynu iska hallaynay waynu suuban karraa.